दसैंका लागि नयाँ नोट असोज २१ गतेबाट,यि ठाउँमा पाइन्छ २७ हजार रुपैयाँसम्म
आजदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाईने , कसरी र कहाँबाट लिने ऋण ?
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने व्यवस्था आजदेखि लागू भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ऋणमा दिइने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएसँगै आजैदेखि उक्त कार्यक्रम लागू भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आज..
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा बाफलमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले काठमाडौंको रिङरोडमा पर्ने सोल्टीदोबाटो चोकस्थित बाफलमा नयाँ शाखा खोलेको छ। शाखाको बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले उद्घाटन गरे। विशेषत कलंकी तथा सितापाइला आसपासका स्थानीयलाई वित्तीय कारोबार छिटो,..
नेशनल माइक्रोफाइनान्स र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांस, नेशनलले ४० प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं। नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैकले लाभांश घोषणा गरेका छन्। नेशनल माइक्रोफाइनान्सले शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २५ प्रतिशत बोनस..
महालक्ष्मी विकास बैंकले १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न असोज २६ गते साधारण सभा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले प्रस्ताव गरेको १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न असोज २६ गते शुक्रबार १७ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते सम्पन्न..
चितवनको कुमरोजमा ग्लोबल आइएमईको शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले असोज ४ गते बिहीबार चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको कुमरोजमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । थप गरिएको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवासंगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा..
युनाइटेड फाइनान्सले ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । युनाइटेड फाइनान्सले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । फाइनान्सले आर्थिक बर्ष ०७४्७५ को नाफाबाट सेयर लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको हो । उक्त लाभांश दिने..
काठमाडौंको चुनिखेलमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १३ स्थित चुनिखेलमा आफ्नो आठौं एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेको छ । बैंकका नायव महाप्रबन्धक विजेन्द्र सुवाल र वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले काउन्टरको..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको connectIPS e-payment प्रणालीमा आजबाट कारोबार शुरु गर्ने गरि शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकलाई उक्त प्रणालीमा आवद्ध..
प्राइम कमर्सियलको जनकपुरमा खुल्यो शाखा
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले जनकपुरमा शाखा कार्यालय शुभारम्भ गरेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा आज एक समारोहका विच नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक..
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कोषका सञ्चयकर्तालाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र..
मुक्तिनाथ विकास बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले गत बर्षको कमाईबाट बैंकले आफ्नो शेयरधनीहरुलाई १८.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो बर्ष बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको..
हाम्रो विकासको लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैङ्क लिमिटेडले शेयरधनीहरुलाई २ दशमलव ४० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ७ दशमलव ९१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैङ्कले उक्त लाभांश..
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले प्रस्ताव गर्यो बोनस
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समतिको भदौ १४ गते बुधबार सम्पन्न १८२ औं बैठकले १८ प्रतिशत बोनस तथा..
ज्योती विकास बैंकलाई हाम्रो विकास बैंक गाभ्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृती
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको ज्योति विकास बैंकलाई नुवाकोटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंक प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृती दिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले सो..
१ नंम्बरको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नाफा, कर्जा र निक्षेप सबैभन्दाबढि
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षमा लोभलाग्दो प्रगति गर्दै वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नम्बर वान बनेको छ । बैंक लाभांश क्षमतामा मात्र हैन निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहमा पनि सबैभन्दा अगाडि..
प्राइम बैंकले कमायो १ अर्ब ८९ करोड खुद नाफा
काठमाडौं । प्राइम बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ८९ करोड रुपैंया खुद नाफा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ४६ करोड रुपैंयाँ रहेको थियो..
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गतबर्ष ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासको उत्साहजनक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । १५ प्रतिशत बढीले चूक्ता पूँजी बढाएको बैंकले २६ प्रतिशत नाफा बढाएर प्रतिशेयर आम्दानी..
एभरेष्ट बैंकको नाफा ३६ प्रतिशतले बृद्धि, २ अर्ब ७० करोड लाभांश दिन सक्ने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) तथा पुरानो दुबै मोडलमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । एनएफआरएस मोडल अनुसार बैंकको खुद नाफा ३५।८९ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ७८..
ग्लोबल आइएमई बैंकको दुई अर्ब १५ करोड लाभांश बाड्ने क्षमता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई दुई अर्ब १५ करोड लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ । बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार प्रकाशित गरेको गत आर्थिक बर्षको..
एनआईसी एसिया बैंक र रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बिच सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक र रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार अब बैंक ग्राहकले बैंकको २३३ वटै शाखाबाट रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा..
एनआईसी बैंकले १ खर्ब ५१ अर्ब निक्षेप संकलन गरि १३ अर्ब २९ करोड ब्याज आम्दानि गर्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष बैंकले १ खर्ब ५१ अर्ब निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब २१ अर्ब कर्जा लगानी गएको छ। बैंकले १३ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याजबाट आम्दानि गरेको..
महालक्ष्मी विकास बैंकले नाफा ५६ करोड कमायो
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ११ करोड ६८ लाखले बढेको छ । यो नाफा २६.३१ प्रतिशतले बढेको हो । यो बैकले अघिल्लो वर्ष ४४..
मेगा बैंकको ‘मेगा मेहन्दी उत्सव’, मेहेन्दी लगाउनेको भीड
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले मेगा मेहन्दी उत्सव मनाएको छ । महिला ग्राहकहरुका लागि मेगा बैंकले पहिलोपटक मेहन्दी उत्सव आयोजना गरेको हो । श्रावण महिनाभर चल्ने यो उत्सवमा ग्राहकहरुले मेगा..
सिभिल बैंकले रिलायबल लाईफ इन्स्योरेन्सको सेवा दिने
काठमाडौं । सिभिल बैंकले जीवन बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख..
एनआईसी एसिया बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक महानुभावले मुलुकभर फैलिएका बैंकको २ सय ३२ वटै शाखाबाट सहज रुपमा..
ऋण दिन विदेशबाट डलर ल्याउने पहिलो बैक बन्यो एनएमबि
काठमाडौं । एनएमबि बैक नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउने पहिलो बैक बनेको छ । बैकको क्षमता तथा योजनाको बिष्लेशण गरे पश्चात नेपाल राष्ट्र बैकले यो..
काठमाडौं । गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नमा वाणिज्य बैंकहरु मध्येमा पहिलो बनेको सिटिजन्स बैंकले खुदनाफा ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकको न्यूनतम आठ अर्ब चुक्ता पूँजी..
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई युरोमनी एक्सिलेन्स पुरस्कार
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि ले युरोमनी एक्सिलेन्स–उत्कृष्ट बैंक नेपाल २०१८ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । प्रतिष्ठित अंगे्रजी आर्थिक मासिक पत्रिका युरोमनीले हङकङमा एशियाका पाँच सय बढी विशिष्ट पाहुना..
एन आई सी एशियाको ‘मिस्ड कल’ अफर, मिस्ड कल गरेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । एन आई सीएशिया बैंक लिमिटेडले नेपालमा विभिन्न शहरी, ग्रामीण तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त पार्दै अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेकोे..
Results 1896: You are at page 15 of 64